လကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂြိုလ်သားတွေ နေခဲ့ဖူးတယ်လို့ သုတေသီတွေပြောလိုက်ပြီ
30 Jul 2018 . 4:10 PM
ဂြိုလ်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်သူမှ မမြင်ဖူးဘူးဆိုမယ့် သုတေသီတွေကတော့ တကယ်ရှိတယ်လို့ လက်ခံထားဆဲပါ။ အခုလည်း လကမ္ဘာမှာ သက်ရှိတွေ ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကို Dirk Schulze-Makuch နဲ့ Ian Crawford ဆိုတဲ့ သုတေသီနှစ်ယောက်က ပြောဆိုလိုက်ပါပြီ။ ဒါဆိုရင် အာကာသထဲ ဂြိုလ်သားတွေ တကယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ထပ်ပြီး အငြင်းပွားစရာဖြစ်လာတော့မှာပါ။
Moon, A nice place to visit?
ဘာလို့လဲဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃.၇ ဘီလီယံလောက်တုန်းက လပေါ်မှာ အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့မယ်လို့ သုတေသီနှစ်ယောက် ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒီမတိုင်ခင် လမျက်နှာပြင်မှာ အပူငွေ့တွေ အဆက်မပြတ်မှုတ်ထုတ်ခဲ့ပုံရပြီး ရေနွေးငွေ့တွေဖြစ်နိုင်သလို ဒီအချက်ကြောင့်လည်း လပေါ်မှာ ရေမျက်နှာပြင်တွေ ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပုံရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အရ လေထုလည်းရှိခဲ့ပုံရပြီး ဒီအချက်တွေဟာ သက်ရှိတွေ နေလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။
It was onceahome for aliens
နောက်ပြီး အာကာသကလာနေတဲ့ Cosmic Ray လို စွမ်းအားပြင်းဓာတ်ရောင်ခြည်တွေ ကာကွယ်နိုင်မယ့် Magnetic Field တွေ လပတ်ပတ်လည်မှာ တည်ရှိခဲ့ဦးမယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဘာလို့ဒီလိုပြောရသလဲဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်ရှိတွေ စပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃.၈ ဘီလီယံလောက်ကဖြစ်ပြီး Cyanobacteria တွေဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းက နေအဖွဲ့အစည်း မတည်မြဲသေးသလို လွှင့်စင်လာတဲ့ ဥက္ကာပျံတွေဝင်တိုက်ခဲ့မှုကြောင့် အဲ့ဒီသတ္တဝါတွေ လကမ္ဘာပေါ် ရောက်ရှိသွားခဲ့တာ ဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။
Meteorite from space may have hit according to expert says
ဒီလို အပူအချိန် အတက်အကျ အရမ်းမြန်လွန်းတဲ့ လမျက်နှာပြင်မှာ ဘယ်သက်ရှိမှ မနေနိုင်သလို သုတေသီနှစ်ယောက် ပြောကြားထားချက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကို ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း ဆိုတဲ့အဖြေကနေ ရှာကြည့်လို့ ရနိုင်မှာပါ။ တကယ်လို့ သူတို့ထွက်ဆိုချက် မှန်ကန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် NASA အတွက် မဟာသတင်းဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဂြိုလ်သားတွေ တကယ်ရှိမရှိဆိုတာ သက်သေပြလာနိင်မယ့် အချက်တစ်ချက် ဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။
လကမ်ဘာပျေါမှာ ဂွိုလျသားတှေ နခေဲ့ဖူးတယျလို့ သုတသေီတှပွေောလိုကျပွီ
ဂွိုလျသားတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ဘယျသူမှ မမွငျဖူးဘူးဆိုမယျ့ သုတသေီတှကေတော့ တကယျရှိတယျလို့ လကျခံထားဆဲပါ။ အခုလညျး လကမ်ဘာမှာ သကျရှိတှေ ရှငျသနျနထေိုငျခဲ့ဖူးတယျဆိုတာကို Dirk Schulze-Makuch နဲ့ Ian Crawford ဆိုတဲ့ သုတသေီနှဈယောကျက ပွောဆိုလိုကျပါပွီ။ ဒါဆိုရငျ အာကာသထဲ ဂွိုလျသားတှေ တကယျရှိမရှိဆိုတဲ့ မေးခှနျးက ထပျပွီး အငွငျးပှားစရာဖွဈလာတော့မှာပါ။
ဘာလို့လဲဆိုရငျ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၃.၇ ဘီလီယံလောကျတုနျးက လပျေါမှာ အငျမတနျပွငျးထနျတဲ့ မီးတောငျပေါကျကှဲမှု ဖွဈပှားခဲ့မယျလို့ သုတသေီနှဈယောကျ ပွောဆိုထားပါတယျ။ ဒီမတိုငျခငျ လမကျြနှာပွငျမှာ အပူငှတှေ့ေ အဆကျမပွတျမှုတျထုတျခဲ့ပုံရပွီး ရနှေေးငှတှေ့ဖွေဈနိုငျသလို ဒီအခကျြကွောငျ့လညျး လပျေါမှာ ရမေကျြနှာပွငျတှေ ဖွဈထှနျးခဲ့ပုံရပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ မွမေကျြနှာသှငျပွငျအရ လထေုလညျးရှိခဲ့ပုံရပွီး ဒီအခကျြတှဟော သကျရှိတှေ နလေို့ရမယျဆိုတဲ့ လက်ခဏာတှပေါ။
နောကျပွီး အာကာသကလာနတေဲ့ Cosmic Ray လို စှမျးအားပွငျးဓာတျရောငျခွညျတှေ ကာကှယျနိုငျမယျ့ Magnetic Field တှေ လပတျပတျလညျမှာ တညျရှိခဲ့ဦးမယျလို့ သုံးသပျထားပါတယျ။ ဘာလို့ဒီလိုပွောရသလဲဆိုရငျ ကမ်ဘာပျေါမှာ သကျရှိတှေ စပျေါခဲ့တဲ့အခြိနျဟာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၃.၈ ဘီလီယံလောကျကဖွဈပွီး Cyanobacteria တှဖွေဈမယျလို့ သုံးသပျထားပါတယျ။ အဲ့အခြိနျတုနျးက နအေဖှဲ့အစညျး မတညျမွဲသေးသလို လှငျ့စငျလာတဲ့ ဥက်ကာပြံတှဝေငျတိုကျခဲ့မှုကွောငျ့ အဲ့ဒီသတ်တဝါတှေ လကမ်ဘာပျေါ ရောကျရှိသှားခဲ့တာ ဖွဈမယျလို့ သုံးသပျထားပါတယျ။
ဒီလို အပူအခြိနျ အတကျအကြ အရမျးမွနျလှနျးတဲ့ လမကျြနှာပွငျမှာ ဘယျသကျရှိမှ မနနေိုငျသလို သုတသေီနှဈယောကျ ပွောကွားထားခကျြနဲ့ နှိုငျးယှဥျကွညျ့မယျဆိုရငျ အဲ့ဒီသတ်တဝါတှကေို ကြောကျဖွဈရုပျကွှငျး ဆိုတဲ့အဖွကေနေ ရှာကွညျ့လို့ ရနိုငျမှာပါ။ တကယျလို့ သူတို့ထှကျဆိုခကျြ မှနျကနျနခေဲ့မယျဆိုရငျ NASA အတှကျ မဟာသတငျးဖွဈလာနိုငျပွီး ဂွိုလျသားတှေ တကယျရှိမရှိဆိုတာ သကျသပွေလာနိငျမယျ့ အခကျြတဈခကျြ ဖွဈလာနိုငျမှာပါ။